वर्षौंसम्म अमेरिकी सेनाको छिमेकी भएर बसे मुल्ला उमर, अमेरिकाले सुइँको पाएन, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
वर्षौंसम्म अमेरिकी सेनाको छिमेकी भएर बसे मुल्ला उमर, अमेरिकाले सुइँको पाएन
बीबीसी। आतंकवादी संगठन तालिवानका प्रमुख नेता मुल्ला उमरको जीवनमा आधारित एउटा नयाँ पुस्तक ‘द सीक्रेट लाइफ अफ मुल्ला उमर’ मा उमर लामो समयसम्म अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी सैन्य अखडा नजिक लुकेर बसेको दाबी गरिएको छ।
यद्यपी अमेरिकी एजेन्सीहरुले लामो समयम्म मुल्ला उमेरको गोप्य अखडा पाकिस्तानमा रहेको अनुमान गरेका थिए। डच पत्रकार बेट्टी डैमले आफ्नो किताबमा दाबी गरे अनुसार मुल्ला उमर आफ्नो अफगानिस्तान प्रान्त जाबुलमा अमेरिकी सैन्य अखडाबाट मात्र तीन मिलको दूरीमा अवस्थित एउटा ठाउँमा लुकेर बसेका थिए।
उमरको अंग रक्षकसँग अन्तवार्ता
डैमले पाँच वर्षसम्म गहन सोध र तालिबानका सदस्यसँग अन्तवार्तापछि जुटाएको जानकारीलाई आफ्नो कितामा स्थान दिएका छन्।
अमेरिकामा वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको आक्रमणपछि अमेरिकी सरकारले मुल्ला उमर विरुद्ध एक करोड रुपैयाँको पुरस्कार घोषणा गरेको थियो।
त्यसपछि कयौं वर्षसम्म अमेरिकी खुफिया एजेन्सी अफगानिस्तानदेखि नजिकका इलाकामा मुल्ला उमरको खोजी गर्न व्यस्त भयो। तर अमेरिकी एजेन्सीको कोशिशलाई बेवास्ता गर्दै मुल्ला उमर अमेरिकी सैन्य अखडा नजिकै लुकेर बस्न सफल भएका थिए। २००१ मा अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार विरुद्ध आक्रमणपछि देखि २०१३ मा आफ्नो निधनसम्म मुल्ला उमर विश्वको नजरबाट ओझेर परेर बसे।
मुल्ला उमर भूमिगत भएपछि जब्बार ओमारी नामका व्यक्तिले उनको अंग रक्षकको भूमिका निर्वाह गरे। बेट्टी डैनले यही व्यक्ति जब्बार ओमारीको अन्तवार्ता लिएका थिए।
उक्त किताबका अनुसार अमेरिकी सुरक्षा बलले एक पटक उमरको अखडामा छापा पनि मारेको थियो। तर उमरको गोप्य कक्ष भेट्टाउन असफल भयो। यो अखडा एक हजार अमेरिकी सैनिक उपस्थिति भएको अमेरिकी सैन्य अखडाभन्दा मात्र तीन माइल टाढा थियो।
योसँगै भूमिगत हुँदै मुल्ला उमरले संवादकालागि आफ्नो स्वयंको भाषा पनि विकसित गरेका थिए।
तालिबानी आतंकवादीको दाबी अनुसार मुल्ला उमर आफ्नो गोप्य ठेगानाबाट तालिबानी गतिविधिलाई नियन्त्रित गर्थे। तर किताबका अनुसार उमरले आफ्नो गोप्य ठेगानाबाट तालिबानी गतिविधिलाई नियन्त्रण गरेनन्।
उद्यपी कतारमा तालिबानको मुख्यालय खोल्ने इजाजत मुल्ला उमरले नै दिएको विश्वास गरिन्छ। आजकल यही मुख्यालयबाट अमेरिकी अधिकारी अफगानिस्तानमा वर्षौंदेखि चलिरहेको युद्ध समाप्त गर्नलाई वार्ता गर्ने कोशिश गरिरहेका छन्।